စွန်ကြီး (၃) ကောင်ကိုဈေးသည်ဆီကနေ ကယ်တင်ပြီး အပင်ကြီးတွေရှိတဲ့ နေရာမှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သန္တာလှိုင်ရဲ့ ကြည်နူးစရာ ဗီဒီယို – Cele Oscar
စွန်ကြီး (၃) ကောင်ကိုဈေးသည်ဆီကနေ ကယ်တင်ပြီး အပင်ကြီးတွေရှိတဲ့ နေရာမှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သန္တာလှိုင်ရဲ့ ကြည်နူးစရာ ဗီဒီယို
February 17, 2021 By L YC Celebrity
စူပါမော်လ်ဒယ် သန္တာလှိုင် ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင်မှု တွေနဲ့ နေရာ တစ်နေရာကိုရပ်တည် ထားတဲ့ မော်လ်ဒယ် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သနားကြင်နာတဲ့ စိတ်ထားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သန္တာလှိုင် ဟာ အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေး တွေကို သားသမီး အရင်းတွေ ကဲ့သို့ ပြုစု ယုယ ဂရုစိုက်ပေး တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ကို ချစ်တဲ့ သန္တာလှိုင်က ပရိသတ်တွေ ကြည်နူး ပီတိ ဖြစ်စေမယ့် ဗီဒီယိုလေး ကို ယခုအခါမှာ တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယို လေးကတော့ သန္တာလှိုင် တို့ ဇနီးမောင်နှံ တို့က လမ်းဘေး ဈေးသည်ဆီကနေ ကယ်တင် ထားတဲ့ စွန်ကြီး (၃) ကောင်ကို အိမ်မှာအစား(၂)ရက် ကျွေးပြီးတဲ့နောက် အပင်အမြင့်ကြီးတွေ ရှိတဲ့ နေရာကို သွားရောက်ကာ ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီဗီဒီယို လေးနဲ့လည်း သန္တာလှိုင် က “လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းဖို့ မွေးဖွားလာတဲ့ မင်းတို့ ဘဝလေးတွေ ကို အချုပ်အနှောင် မှ လွတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည် ဆီကနေ ကယ်တင် ပြီး ၂ရက် အားဖြည့်၊ အစာကျွေးပြီး ဒီနေ့ လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါက ငါတို့အားလုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် မတရားသဖြင့်ချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ သတ္တဝါ များအားလုံး အချုပ်အနှောင်မှ အမြန်ဆုံးလွ တ်မြောက်ကြပါစေသား……အားလုံးအမျှအမျှအမျှ ယူတော်မူကြပါစေကုန်သား…. အားလုံးအမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါစေကုန်သား…. အားလုံးအမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါစေကုန်သား….
မတရား သဖြင့် ကြိုးချည်ပြီး ချုပ်နှောင်ခံ ထားရတဲ့ စွန်ကြီး (၃) ကောင်ဟာ အိမ်ရောက် တော့ သူတို့ကို တုတ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ ဖြေလိုက်တော့ ခေါင်းတောင်မထောင်နိုင်ဘူး…. ရေလဲ မသောက်နိုင် မတ်တပ်လဲ မရပ်နိုင်ပါဘူး….. ညစ်ပတ် လာတဲ့ အတောင် တွေက ကပ်နေတော့ ရေဆေးပြီး သူတို့ဘာစားလဲ ဘယ်လို ဘယ်အချိန်စားလဲ YouTube မှာ သေချာလေ့ လာပြီး ငုံးလေးတွေ ဝယ်ကျွေးပြီး ရေတိုက် အခန်းထဲ အပျံကျင့်ပြီး (၂)ရက်နေတော့ ပျံသန်းဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်တာနဲ့ အပင်အမြင့်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာ (၃)ကောင် အတူတူလွှတ်ပေးလိုက်တော့ (၂) ကောင်က အတူတူ ပျံသွားတာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် ကျမိတယ်။ အမေတို့သာ ဆိုရင်….”ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ကဲ..ပရိသတ်ကြီး ရေ စွန်ကြီး ( ၃)ကောင်ကို ကယ်တင်ပြီး ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ သန္တာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ တို့ကို ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါဦး။
သတင်းအရင်းမြစ်: Video Credit & Source – Thandar Hlaing fb page
စူပါမျောလျဒယျ သန်တာလှိုငျ ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ အောငျမွငျမှု တှနေဲ့ နရော တဈနရောကိုရပျတညျ ထားတဲ့ မျောလျဒယျ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သနားကွငျနာတဲ့ စိတျထားလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သန်တာလှိုငျ ဟာ အိမျမှာ မှေးထားတဲ့ တိရိစ်ဆာနျလေး တှကေို သားသမီး အရငျးတှေ ကဲ့သို့ ပွုစု ယုယ ဂရုစိုကျပေး တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ တိရိစ်ဆာနျလေးတှေ ကို ခဈြတဲ့ သန်တာလှိုငျက ပရိသတျတှေ ကွညျနူး ပီတိ ဖွဈစမေယျ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ယခုအခါမှာ တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီဗီဒီယို လေးကတော့ သန်တာလှိုငျ တို့ ဇနီးမောငျနှံ တို့က လမျးဘေး စြေးသညျဆီကနေ ကယျတငျ ထားတဲ့ စှနျကွီး (၃) ကောငျကို အိမျမှာအစား(၂)ရကျ ကြှေးပွီးတဲ့နောကျ အပငျအမွငျ့ကွီးတှေ ရှိတဲ့ နရောကို သှားရောကျကာ ပွနျလညျ လှတျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီဗီဒီယို လေးနဲ့လညျး သန်တာလှိုငျ က “လှတျလပျစှာ ပြံသနျးဖို့ မှေးဖှားလာတဲ့ မငျးတို့ ဘဝလေးတှေ ကို အခြုပျအနှောငျ မှ လှတျပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြ နဲ့ လမျးဘေးစြေးသညျ ဆီကနေ ကယျတငျ ပွီး ၂ရကျ အားဖွညျ့၊ အစာကြှေးပွီး ဒီနေ့ လှတျပေးခဲ့ပါတယျ။ “ဤသစ်စာစကားမှနျကနျပါက ငါတို့အားလုံးရဲ့ ခေါငျးဆောငျမြား အပါအဝငျ မတရားသဖွငျ့ခြုပျနှောငျခံထားရတဲ့ သတ်တဝါ မြားအားလုံး အခြုပျအနှောငျမှ အမွနျဆုံးလှ တျမွောကျကွပါစသေား……အားလုံးအမြှအမြှအမြှ ယူတျောမူကွပါစကေုနျသား…. အားလုံးအမြှ အမြှ အမြှ ယူတျောမူကွပါစကေုနျသား…. အားလုံးအမြှ အမြှ အမြှ ယူတျောမူကွပါစကေုနျသား….
မတရား သဖွငျ့ ကွိုးခညျြပွီး ခြုပျနှောငျခံ ထားရတဲ့ စှနျကွီး (၃) ကောငျဟာ အိမျရောကျ တော့ သူတို့ကို တုတျထားတဲ့ ကွိုးတှေ ဖွလေိုကျတော့ ခေါငျးတောငျမထောငျနိုငျဘူး…. ရလေဲ မသောကျနိုငျ မတျတပျလဲ မရပျနိုငျပါဘူး….. ညဈပတျ လာတဲ့ အတောငျ တှကေ ကပျနတေော့ ရဆေေးပွီး သူတို့ဘာစားလဲ ဘယျလို ဘယျအခြိနျစားလဲ YouTube မှာ သခြောလေ့ လာပွီး ငုံးလေးတှေ ဝယျကြှေးပွီး ရတေိုကျ အခနျးထဲ အပြံကငျြ့ပွီး (၂)ရကျနတေော့ ပြံသနျးဖို့အဆငျသငျ့ ဖွဈတဲ့ပုံပျေါတာနဲ့ အပငျအမွငျ့ကွီးတှရှေိတဲ့နရောမှာ (၃)ကောငျ အတူတူလှတျပေးလိုကျတော့ (၂) ကောငျက အတူတူ ပြံသှားတာ တှလေို့ကျရတဲ့ အခြိနျမှာ ဝမျးသာလှနျးလို့ မကျြရညျတောငျ ကမြိတယျ။ အမတေို့သာ ဆိုရငျ….”ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။ ကဲ..ပရိသတျကွီး ရေ စှနျကွီး ( ၃)ကောငျကို ကယျတငျပွီး ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့တဲ့ သန်တာလှိုငျတို့ ဇနီးမောငျနှံ တို့ကို ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သပေးပါဦး။
သတငျးအရငျးမွဈ: Video Credit & Source – Thandar Hlaing fb page
ဗဟိုဘဏ်ရှေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ တက်တက် ကြွကြွပါဝင်ရင်း ပြည်သူ တွေကို အအေးတွေ ပေးဝေနေခဲ့တဲ့ Rဇာနည်